Ch4यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch4यूहन्ना
4:1 अनि त, येशूले फरिसीहरूले येशूलाई थप चेलाहरू गरे भनेर सुनेका बुझे र यूहन्ना भन्दा बढी बप्तिस्मा गर्दा,
4:2 (येशूले हुनत आफूलाई बप्तिस्मा थिएन, तर आफ्ना चेलाहरूलाई मात्र)
4:3 उहाँले यहूदिया छोडेर, र उहाँले गालील फेरि यात्रा.
4:4 अब उहाँले सामरियामा मार्फत पार गर्न आवश्यक.
4:5 त्यसैले, उहाँले सामरियाका शहर सुखार भनिन्छ जो गए, याकूबले आफ्नो छोरा यूसुफलाई दिए जो सम्पत्ति नजिकै.
4:6 र याकूबको राम्रो थियो. र यति येशूले, यात्रा बाट थकित भएर, राम्रो तरिकाले मा एक निश्चित तरिका मा बसिरहेका थिए. यो छैटौं घण्टा थियो.
4:7 सामरियाका एक महिला पानी आकर्षित गर्न आइपुगे. येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "पिउन मलाई दिनुहोस्।"
4:8 आफ्ना चेलाहरूलाई आदेश खानेकुरा किन्न मा शहर गएका थिए लागि.
4:9 अनि त, कि सामरी स्त्रीले उहाँलाई भने, "यो तपाईं कसरी छ, एक यहूदी भएर, मलाई एक पेय अनुरोध गर्दै, हुनत म सामरी स्त्रीको छु?"यहूदीहरूले लागि सामरीहरूलाई संगत छैन.
4:10 येशूले जवाफ र तिनलाई भन्नुभयो: "तपाईं परमेश्वरको वरदान थियो भने, र जो जसले तपाईंलाई भन्दै छ, 'पिउन मलाई दिनुहोस्,'सायद तपाईं उहाँलाई अनुरोध गरेका छन् थियो, र उहाँले तपाईं जिउँदो पानी दिइएको थियो। "
4:11 महिला उहाँलाई भने: "प्रभु, तपाईं जो पानी आकर्षित गर्न संग केहि छैन, र राम्रो तरिकाले गहिरो छ. कहाँबाट, त्यसपछि, तपाईं जिउँदो पानी छैन?
4:12 निश्चय, तपाईं हाम्रो पिता याकूबको भन्दा ठूलो हो, जसले हामीलाई राम्रो तरिकाले दिए र कसले यो देखि पिए, आफ्नो छोरा र आफ्नो गाई संग?"
4:13 येशूले जवाफ र तिनलाई भन्नुभयो: "यो पानी पिउन गर्ने सबै फेरि तिर्खा हुनेछ. तर पानी जसले लगाउँला उसलाई सदाको लागि तिर्खा छैन म दिन हुनेछ.
4:14 बरु, म उसलाई दिनेछु कि पानी पानी फोहरा उहाँलाई हुनेछ, अनन्त जीवन मा अप springing। "
4:15 महिला उहाँलाई भने, "प्रभु, मलाई यो पानी दिन, म तिर्खा कि सक्दैनन् र पानी आकर्षित गर्न यहाँ आउन सक्छ त्यसैले। "
4:16 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "जानुहोस्, आफ्नो पति कल, र यहाँ फर्कनुहोस्। "
4:17 महिला प्रतिक्रिया र भन्नुभयो, "म कुनै पति।" येशूले भन्नुभयो उनको: "तपाईं राम्रो बोलेको छु, भन्दै मा, 'म कुनै पति छन्।'
4:18 लागि पाँच पति छन्, तर उहाँले तपाईं अब कसको आफ्नो पति छ. तपाईं सत्य यो बोलेको छु। "
4:19 महिला उहाँलाई भने: "प्रभु, म एक अगमवक्ता हुन् भनेर हेर्न.
4:20 हाम्रो पुर्खाहरूले यो पर्वतमा उपासना, तर के तिमी यरूशलेम जहाँ एक उपासना गर्नुपर्छ स्थान हो भन्छन्। "
4:21 येशूले तिनलाई भन्नुभयो: "नारी, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं पिता उपासना गर्नेछन् जब घण्टा आउँदै छ, न यो पर्वतमा, न त यरूशलेममा.
4:22 के तपाईं थाह के छैन उपासना; हामी थाह के उपासना. मुक्तिको लागि यहूदीहरूले हो.
4:23 तर घण्टा आउँदै छ, र यो अब, साँचो उपासकहरू आत्मा र सत्यतामा पिता उपासना गर्नेछन् जब. पिता पनि यस्तो व्यक्ति खोज्ने लागि जो उहाँको उपासना सक्छ.
4:24 भगवान आत्मा छ. अनि त, उहाँको उपासना गर्नेहरूलाई आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नुपर्छ। "
4:25 महिला उहाँलाई भने: "म मसीह आउँदै छ भनेर थाहा (जो ख्रीष्टको भनिन्छ). अनि तेस्पछि, उहाँले आइपुगेको छ जब, उहाँले हामीलाई सबै घोषणा हुनेछ। "
4:26 येशूले तिनलाई भन्नुभयो: "म त्यो हुँ, तपाईं संग बोल्ने छ जो एक। "
4:27 र त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूलाई आइपुगे. र तिनीहरूले त्यो महिला संग बोल्ने थियो छक्क परे. अहिलेसम्म कुनै एक भन्नुभयो: "तपाईं के खोजिरहेका छन्?"वा, "तपाईं किन उनको साथ कुरा गर्दै छन्?"
4:28 र त महिला उनको पानी जार छोडेर र शहर गए. र त्यो त्यहाँ मानिसहरूलाई भन्नुभयो:
4:29 "आऊ र मलाई म गरेका सबै कुराहरू भन्नुभयो छ मानिस हेर्न. उहाँले ख्रीष्ट हुनुहुन्छ?"
4:30 त्यसैले, तिनीहरूले शहर बाहिर गए र उहाँलाई आए.
4:31 यसैबीच, चेलाहरूले उहाँलाई बिन्ती, यसो, "रब्बी, खान। "
4:32 तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "म जो तपाईं थाहा छैन खान खाना छ।"
4:33 त्यसैले, चेलाहरूले आपसमा भने, "कसैले उहाँलाई खान केही सक्थ्यो?"
4:34 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "मेरो खाना मलाई पठाउनुहुने एक को इच्छा छ, म आफ्नो काम परिपूर्ण हुन सक्छ भनेर.
4:35 तपाईं भन्नुहुन्न, 'त्यहाँ चार महिना अझै पनि छन्, त्यसपछि बाली आएको?'हेर, म तपाईंलाई भन्न: आफ्नो आँखा उचाली र देहात हेर्न; यसलाई पहिले नै फसल लागि पाकेको छ.
4:36 उहाँले कसले reaps, ज्याला प्राप्त र अनन्त जीवन निम्ति फल बटोरता, ताकि दुवै उहाँले जो sows र उहाँले reaps गर्ने एकसाथ रमाउँछन् सक्छ.
4:37 यो शब्द साँचो हो: यो एक जो sows छ कि, र अर्को गर्ने reaps छ.
4:38 म जसको लागि तपाईं श्रम गरेनन् कि कटनी गर्न पठाएको छ. अरूलाई labored छ, र तपाईं आफ्नो मेहनत मा प्रवेश गरेका छन्। "
4:39 उहाँलाई विश्वास छ कि शहर देखि सामरीहरूलाई को अब धेरै, किनभने जसले गवाही भेटी थियो स्त्रीको शब्द को: "लागि उहाँले मलाई म गरेका सबै कुराहरू भन्नुभयो।"
4:40 त्यसैले, सामरीहरूलाई उहाँलाई आएका थिए जब, उनीहरू त्यहाँ lodge उसलाई बिन्ती. र उहाँले दुई दिनको लागि त्यहाँ lodged.
4:41 र धेरै उहाँलाई विश्वास, किनभने आफ्नै शब्द को.
4:42 र तिनीहरूले महिला भने: "अब हामी विश्वास, किनभने आफ्नो बोली को, तर किनभने हामीले उहाँलाई सुनेका, र त हामी त्यो साँच्चै संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर थाह छ। "
4:43 त्यसपछि, दुई दिन पछि, उहाँले त्यहाँ बाट प्रस्थान, र उहाँले गालीलमा यात्रा.
4:44 येशूको लागि आफूलाई एक अगमवक्ता आफ्नै देशमा कुनै सम्मान छ गवाही प्रस्ताव.
4:45 अनि त, उहाँले गालील आइपुगेका थिए जब, को गालीलीहरू उहाँलाई प्राप्त, किनभने उनीहरू उहाँले यरूशलेममा गरेको थियो सबै देखेका थिए, यस भोजमा दिनमा. तिनीहरूले पनि भोज दिन गए लागि.
4:46 त्यसपछि उहाँले गालील Cana मा फेरि गए, उहाँले रक्सी पानी गरे जहाँ. र त्यहाँ एक निश्चित शासक थियो, जसको छोरा कफर्नहुममा मा बिरामी थियो.
4:47 येशूलाई यहूदियाबाट गालीलमा आए भनेर सुनेका देखि, उहाँलाई पठाइएको र उसलाई तल आउन र आफ्नो छोरा निको पार्ने बिन्ती गरे. उहाँले मर्न सुरु भएको थियो लागि.
4:48 त्यसैले, येशूले उसलाई भन्नुभयो, "जबसम्म तपाईं संकेत र विचित्रताहरू देखेको छु, विश्वास छैन। "
4:49 शासक उहाँलाई भने, "प्रभु, मेरो छोरो मर्छ अघि तल आउनुहोस्। "
4:50 येशूले उसलाई भन्नुभयो, "जानुहोस्, आफ्नो छोरा बसोबास। "मानिसले येशूले बोल्नुभयो भन्ने शब्द विश्वास, र त त्यो दूर भयो.
4:51 त्यसपछि, उहाँले तल जाँदै थियो, आफ्ना सेवकहरूलाई उहाँको भेट. र तिनीहरूले उहाँलाई रिपोर्ट, आफ्नो छोरा जीवित थियो भन्दै.
4:52 त्यसैले, उहाँले राम्रो भएका थिए जो घण्टा तिनीहरूलाई सोधे. र तिनीहरूले उहाँलाई भने, "हिजो, सातौं घण्टा मा, ज्वरो उहाँलाई छोड्यो। "
4:53 त्यसपछि बुबा यो येशूले उसलाई भन्नुभयो समान घण्टा थियो भनेर बुझे, "तपाईंको छोरा बसोबास।" अनि उहाँ र उहाँका सम्पूर्ण घरेलू दुवै विश्वास.
4:54 यो अर्को साइन येशूले पूरा गर्ने दोस्रो थियो, उहाँले यहूदियाबाट गालीलमा आइपुगेका थिए पछि.